जान्नुस् कसरी चुनिन्छन् समानुपातिक सांसद ?-Nagarikaawaj.com
जान्नुस् कसरी चुनिन्छन् समानुपातिक सांसद ?
नागरिक आवाज/काठमाडौं, मंसिर २६।
प्रतिनिधि सभा समानुपातिक मत मत गणना जारी छ । एमालेले करिब ८० हजारभन्दा बढी मतको अग्रता लिएको छ । ३१ लाख १० हजार १९४ मत गणना हुँदासम्म प्रमुख ४ दलले मात्रै ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड क्रस गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एमाले, कांग्रेस, माओवादी र संघीय समाजवादी फोरमले मात्रै थ्रेसहोल्ड क्रस गरेका हुन् । प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिएका क्षेत्रमा समानुपातिकको मतगणना भइरहेको छ ।
तर, २ नम्बर प्रदेशको कम मत गणना भएकाले सो प्रदेशमा पहिलो दल बनेको राजपाले पनि ३ प्रतिशत क्रस गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
अन्य, राप्रपा, विवेकशील, नयाँ शक्ति लगायतका पार्टीले ३ प्रतिशत पुर्याउन सक्ने सम्भावना बाँकी नै छ । एमालेले ११ लाख ४६ हजार ६८३ मत ल्याएको छ भने कांग्रेसले १० लाख ६५ हजार ४७६ मत ल्याएको छ ।
यता तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रले ४ लाख हजार ६३ हजार ९५ मत ल्याएको छ । त्यसैगरी चौथो स्थानमा रहेको संघीय समाजवादी फोरमले ८२ हजार ४०९, पाँचौं स्थानमा रहेको विवेकशील साझा पार्टीले ६५ हजार ८२९ मत ल्याएको छ ।
यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ६० हजार ८० मत ल्याएको छ। त्यस्तै नयाँ शक्तिले ३५ हजार ६४९, ६ हजार ५७८ राष्ट्रिय जनमोर्चाले २६ हजार ६३९ मत ल्याएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक २३ हजार ८०४ मत प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै अन्य दलले ८७ हजार १७७ मत ल्याएका छन् ।
कसरी चुनिन्छन् समानुपातिक सांसद ?
समानुपातिकमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड नकटाउने दलले सिट पाउने छैनन् । ती दलले प्राप्त गरेको मतबाहेक थ्रेसहोल्ड कटाउने दलबीच मतका आधारमा समानुपातिकको सिट बाँडफाँट हुन्छ । त्यसरी बाँकी रहेको मतलाई नै शतप्रतिशत मानी निर्धारित सिट सङ्ख्याका आधारमा दललाई सिट बाँडफाँट हुन्छ ।
सिट बाँडफाँट गर्दा तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले प्राप्त गरेको मत कुल मतमा गणना हुँदैन । थ्रेसहोल्ड नकटाउने दलले पाएको मत काम नलाग्ने भएपछि बाँकी मत शतप्रतिशत मान्दा सिट पाउने अन्य दललाई केही फाइदा हुने देखिन्छ। यसले सिट पाउन चाहिने न्यूनतम मत सङ्ख्यालाई कम गर्नेछ ।
दुई चरणका निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ मतदाता रहेकोमा १ करोड पाँच लाख ८७ हजार ५२१ मत खसेको थियो । खसेको मतमा बदर मत पनि रहेको हुन्छ । यसमा सदर मतलाई आधार मानेर थ्रेसहोल्ड कटाउने दल र सदर मत छुट्याइन्छ ।
यो निर्वाचनमा करिब पाँच प्रतिशत मत बदर हुने अनुमान गरिएको छ । जसअनुसार करिब १ करोड मत सदर हुँदा थ्रेसहोल्ड कटाएको दलले कम्तीमा ४ जना सांसद पाउन सक्छ ।
तर, प्रदेशसभाको हकमा भने तोकिएको एक दशमलव ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाए पनि सिट पाउने ग्यारेन्टी भने हुन्न । किनभने मत विभाजक सूत्रअनुसार प्रदेशका लागि तोकिएको सिट बाँड्दा थ्रेसहोल्डका लागि तोकिएको मत प्रतिशतभन्दा सिटका लागि आवश्यक मत बढी हुनसक्छ ।